ချက်ချင်း Pot Cheesecake (၁ နာရီအောက်သာကြာပါသည်) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
သငျသညျ pancake ရောနှောဖို့ငှက်ပျောသီးထည့်နိုင်ပါတယ်
လက်ငင်း Cheesecake အိုး
ဤလက်ငင်း Pot Cheesecake သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးချောမွေ့သောမရှုံးနိမ့်သည့်အလွန်ပါးလွှာသောချိစ်ကိတ်မုန့်ဖြစ်သည်။
ဂန္တ ၀ င် vanilla cheesecake ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလိုအပ်နေတဲ့စာရွက်ဖြစ်ပြီးဒီ Instant Pot Cheesecake ဟာသူတို့ရဲ့ဖိအားချက်ပြုတ်စက်များကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ နှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက် စတော်ဘယ်ရီငံပြာရည် သို့မဟုတ်လွယ်ကူသည် Caramel Sauce အထူးအားရစရာဘို့!
ဘာလို့ချက်ချင်းပဲ Pot မှာဒိန်ခဲလုပ်တာလဲ။
ကျွန်ုပ် Instant Pot ကိုပထမဆုံးရသောအခါငါကိတ်မုန့်လုပ်ရန်တွန်းအားပေးသူများထဲမှတစ်ယောက်မဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံလိမ့်မည်။
အစဉ်အမြဲငါမြန်မြန်ဆန်ဆန်ချက်ပြုတ်သူလို့ကျွန်တော်အမြဲထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်အသားတွေ၊ ဟင်းချိုတွေ၊ ယခုငါငါသည်စောစောစီးစီးမစတင်ခဲ့စိတ်ပျက်မိပါတယ်!
Instant Pot (သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်ဖိအားပေးစက်) သည်စိုထိုင်းသောဝန်းကျင်ကြောင့်“ ဖုတ်ထားသော” ချိကိတ်တစ်ချက်ကိုချက်ပြုတ်ရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မီးဖို၌ရေဗတ်များနှင့်ပြည့်နေမည့်အစားကျွန်ုပ်တို့အနားယူနိုင်သည် ဒိန်ခဲဒိန်ခဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Instant Pot ၏ trivet အပေါ်နှင့်ရေနွေးငွေ့က၎င်း၏မှော်အလုပ်လုပ်ကြကုန်အံ့။
ဒီလက်ငင်း Pot Cheesecake အပေါ်မူကွဲ
ငါနှင့်အတူချက်ပြုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာတိုးတက်အောင်နှင့်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီအခြေခံ vanilla cheesecake ကိုပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ် လက်ငင်း Pot ရုံမီးဖို၌တစ်ခုခုပစ်ထက်အနည်းငယ်ပိုအလေ့အကျင့်ကြာပါသည်။
ချက်နည်းကိုမပြောင်းဘဲ Instant Pot Cheesecake ကို jazz လုပ်ရန်နည်းလမ်းအချို့ဤတွင်ရှိပါသည်။
မတူညီသောအပေါ်ဆုံးနှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်: လတ်ဆတ်သောသီး, သံပုရာထောပတ် ချောကလက် ကြာပွတ်မုန့် သို့မဟုတ်အရောင်အသွေးစုံသောအသီးအမျိုးမျိုးကိုအသီး tart မှုတ်သွင်းထားသော cheesecake အတွက်ထိပ်ပိုင်းတွင်စီစဉ်ထားပါ။
လတ်ဆတ်သော Citrus လည်ပတ်မှုအတွက် Lemon တစ်ခု (သို့) နှစ်လုံးမှသံပုရာရည် zest တွင်ရောမွှေပါ။
အခြားအရသာအတွက်ဂရေဟမ်အစအနများကိုလဲလှယ်ပါ - ချောကလက်ဖုတ်ခြင်းအစအနများ၊
ရိုးရိုး Oreo cheesecake လှည့်ဖျားရန်ကြေမွ Oreo ကွတ်ကီးများကိုလှော်ပါ။ အလွန်အကျွံဖြည့်စွက်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါကချိစ်ကိတ်မုန့်၏အမြင့်နှင့်ချက်ပြုတ်ချိန်ကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မည်။
ချက်ချင်း Pot Cheesecake ပြုလုပ်နည်း - အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်သိကောင်းစရာများ!
အပေါ်ယံလွှာ: ငါအပေါ်ယံလွှာကယ့်ကိုမြဲမြံစွာ crispy နေဖို့ကူညီပေးသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ (ဟုတ်ကဲ့ဒါကကျနော်တို့တစ်ကိတ်မုန့်ကိတ်မုန့်ဖုတ်မဟုတ်သည့်အခါမီးဖိုကိုဖွင့်ဆိုလိုသည်) ငါအပေါ်ယံလွှာဖုတ်ဖို့ပိုနှစ်သက်။ သင်လုပ်နိုင်သည်ဆိုလျှင်သင်သည်ဤအဆင့်ကိုကျော်သွားနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်မထောက်ခံပါ။
INGREDIENTS: အခန်းအပူချိန်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်အတူစတင်ပါ။ အအေးမုန့်ဒိန်ခဲသည်ဒိန်ခဲတစ်လုံးကိုပြုလုပ်သောကြောင့်၎င်းသည်ဒိန်ခဲတိုင်းအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
ရောစပ်ခြင်း ဒါကြောင့် Battery ကိုမှလွန်းလေထု add မယ်လို့အဖြစ်, မရောနှောပါနဲ့။ cheesecake မှလေပူဖောင်းများ - အထူးသဖြင့်ဖိအားအောက်တွင်! - ချက်ပြုတ်နေစဉ်ရယ်စရာအရာများကိုလုပ်နိုင်သည်။
စက်ကိရိယာ လတ်ဆတ်သောတံဆိပ်ခတ်ကွင်းကိုသုံးပါ။ စျေးသိပ်မကြီးတဲ့ရှာပါ အစားထိုးတံဆိပ်ခတ်ကွင်း အွန်လိုင်း Instant Pot အဘို့။ အကယ်၍ သင်သည်အသားသို့မဟုတ်အရသာရှိသောဟင်းလျာများကိုချက်ပြုတ်ရန်မရည်ရွယ်ပါက၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ ဆီလီကွန်ကွင်းများသည်အနံ့ဆိုးများကိုစွဲမြဲစေသည် ကင်နိုင်ပါတယ် ဒါမှမဟုတ် ကြက်သား Tacos , အချိုပွဲချက်ပြုတ်နည်းများအားလုံးအတွက်လတ်ဆတ်သောတံဆိပ်ခတ်လက်စွပ်ကိုအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံး။
ဘလူးဘယ်ရီဒိန်ခဲ - ထိုနွေရာသီ blueberries များအတွက်!
လွယ်ကူသော Cheesecake စာရွက် - နွေရာသီအသီးတစ်လုံးအတွက်ပတ္တူအလွတ်တစ်ခု!
Oreo No Bake ဒိန်ခဲ - နွေးထွေးသောနေ့အတွက်လွယ်ကူသောအချိုပွဲ။
လွယ်ကူသော Cheesecake ကိုက် - ပါတီပွဲတစ်ခုအတွက်အကောင်းဆုံး။
အဘယ်သူမျှမ Bake ချောကလက်ဒိန်ခဲ - ချောကလက်ချစ်သူများအတွက်လွယ်ကူသောအချိုပွဲ။
ဒီလက်ငင်း Pot Cheesecake စာကိုသင်နှစ်သက်ပါသလား။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်မှတ်ချက်ထွက်ရန်သေချာစေပါ။
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၃။ မိနစ်များ ရေခဲသေတ္တာအချိန်၈ နာရီ စုစုပေါင်းအချိန်၈ နာရီ 49 မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁၂ စားသုံးခြင်း စာရေးသူအက်ရှလေဖာ ဒီလက်ငင်း Pot Cheesecake ဟာနွေရာသီအသီးများနဲ့ကောင်းမွန်စွာပေါင်းစပ်ထားတဲ့ creamy အချိုပွဲတစ်ခုပါ။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢ လက်ငင်း Pot 6qt
▢ လက်ငင်း Pot Cheesecake Pan
▢1 ½ ခွက် ဂရေဟမ်
▢¼ ခွက် အရည်ကျိုထောပတ်
▢၁၆ အောင်စ ဒိန်ခဲမုန့် အခန်းအပူချိန်
▢3/4 ခွက် သကြားဓာတ်
▢1/2 ခွက် ဒိန်ချဥ် သို့မဟုတ်ဂရိဒိန်ချဉ် (လွင်ပြင်)
▢နှစ် ဥကြီးကြီး အခန်းအပူချိန်
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း vanilla
▢1 ½ ခွက် ရေ လက်ငင်း Pot အဘို့
အလယ်အလတ်ပန်းကန်လုံးထဲ၌ဂရေဟမ်အနံနှင့်ထောပတ်များကိုရောနှောပါ။ အောက်ခြေသို့ဖိပြီး7'springform ဒယ်အိုးသို့မဟုတ်တွန်းအားပေးဒယ်အိုး၏နှစ်ဖက်တက် 1 အကြောင်းကို။
အပေါ်ယံလွှာ ၁၀ မိနစ်သို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့သည်အထိဖုတ်ပါ။ အနည်းငယ်အေးရန်ဘေးဖယ်ထားပါ။
ကြက်ဥနှင့် vanilla ထည့်ပြီးအချောမွေ့သည်အထိအမြန်နှုန်းကိုရိုက်ပါ။
ပြင်ဆင်ထားအပေါ်ယံလွှာသို့သွန်းလောင်း။ ကောင်တာပေါ်ရှိညင်ညင်သာသာကိုအသာပုတ်။ လေပူဖောင်းများကိုထိပ်သို့ရောက်စေ။ ဓားဖြင့်ခုတ်ပါ။
ရေကို Instant Pot ထဲသို့သွန်းလောင်းပါ၊ ပြီးလျှင် trivet ကိုအိုးထဲထည့်ပါ။ အပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလောက်လွှဲကို trivet ရဲ့ထိပ်မှာထားပါ။ အောက်ဘက်မှာပြားနေအောင်ထားပါ။ နှစ်ဖက်စလုံးကိုကပ်ထားပါ။
အဖုံးဖွင့်ပါ၊ အဆို့ရှင်ကိုတံဆိပ်ခတ်ထားပါ။ ၃၂ မိနစ်အတွက်ဖိနပ်ကွတ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဖိအားတည်ဆောက်ရန် ၁၀ မိနစ်ခန့်ကြာမည်။
ထမင်းချက်ချိန်ပြီးသွားရင် Instant Pot ကိုပိတ်ပြီးအဆို့ရှင်ကိုဖွင့်ပြီးအဖုံးကိုမဖယ်ရှားခင်ဖိအားကိုသဘာဝကျကျလွှတ်ပေးပါ။
လောက်လွှဲသုံးပြီး Instant Pot မှဒယ်အိုးကိုဖယ်ပါ။ ၈ နာရီသို့မဟုတ်တစ်ညအအေးမအေးမီအခန်းအပူချိန်သို့အအေးခံရန်ဝါယာကြိုးတစ်ခုပေါ်တင်ထားပါ။
သော့ချက်စာလုံးချက်ချင်းအိုးတစ်လုံးထဲမှာ cheesecake၊ ချက်ပြုတ်တဲ့ pot cheesecake၊ ချက်ပြုတ်တဲ့ချက်ပြုတ်ချက်ချက်နည်း သင်တန်းအချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုချက်ချင်းကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။